Warsaxaafadeed:- Dallada Isku Xidhka Jaaliyadaha Somaliland Ee Yurub(SSE) Oo Baaq Culus Ka Soo Saartay Doorashada Madaxtooyada Somaliland | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Warsaxaafadeed:- Dallada Isku Xidhka Jaaliyadaha Somaliland Ee Yurub(SSE) Oo Baaq Culus Ka Soo Saartay Doorashada Madaxtooyada Somaliland
October 18, 2017 | Published by: baxsane
Baaqa ka soo baxay dallada SSE oo Oodweynenews soo gaadhsiiyey xoghayaha daladaasi Cali Xasan ayaa ku wajahnaa xukuumada, guddida doorashada, xisbiyada qaranka, warbaahinta iyo shacabka somaliland.
Baaqaas oo dhamaystiran ayaan u dhignaa sidan:-
Dallada isku xidha Jaaliyadaha Somaliland ee Yurub (SSE) waxay idinla wadaageysa baaqan ku wajahan doorashada madaxtooyadda Jamhuuriyadda Somaliland ku soo fool bisha Noofembar ee sannadkan 2017(ka). Dhammaan shicibka reer Somaliland waa doorasho ay wada sugayaan isla markaana ay dareensanyihiin muhimada
ay u leedahay dalka iyo dadka. Waa doorasho sidoo kale ay indhaha ku hayaan beesha caalamku isla markaana ay dhowrayaan jawiga iyo qaabka ay qabashadeedu u dhacdo. Waxa aynu la soconaa doorashadii ka dhacday Kenya ee fashilka ku dhammaatay. Waxaynu la soconnaa in waddanka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya aanay weligeed ka dhicin doorasho uu muwaadinku doorto cidda hoggaaminaysa. Sababahaa ayaa keenaya in doorashada waddankeenna ka dhacaysa il gaara lagu hayo. Waxay doorashadu muujinaysaa bisaylka siyaasadeed ee dalkeenna iyo dadkeennu gaadheen.
Dallad ahaan waxa aannu marka hore ku bogaadinaynaa dhammaan dhinacyada ku hawlan arrimaha doorashada sida ay uga soo baxeen waajibaadka ka saarnaa sidii loo dhammaystiri lahaa hawlaha qabyada ka ahaa doorashada oo ah dejinta iyo xaaleynta wixii qabyo ka ahaa diiwaangelinta, kala hufida xogtii la ururiyay, daabacaadda kaadhadhka iyo weliba qaybinta kaadhadhka cod-bixiyayaasha. Hawlahan qabsoomay may sahlanayn, waxayna calaamad fiican u yihiin inay Jamhuuriyadda Somaliland u qabsoomi doonto doorasho loogu tartamo si xor iyo xalaal ah.
Doorashadani waa mid qabashadeedu ay ka duwanaanayso kuwii ka horreeyay, maadaama codbixiyayaashu ay ku codeynayaan qaab diiwaangelin iyo kaadhadh aqoonsi.
Si doorashadu ay innoogu noqoto mid ku qabsoonta caddaalad ayaa dallada SSE ay soo jeedinaysaa talooyinka soo socda:
Dallada SSE iyada oo og waajibaadka, culeyska iyo mas’uuliyadda saaran Guddiga Doorashooyinka Jamhuuriyadda Somaliland ayaannu kula dardaarmaynaa inay noqdaan kuwo ku sugnaada dhexdhexaadnimo looga baahanyahay, maadaama ay yihiin udub-dhexaadka tartanka doorashada. Maadaama doorashooyinku ay leeyihiin duruufahooda u gaarka ah ayaannu idinkula dardaarmaynaa inaad noqotaan kuwo leh adkeysi ku wajahan hawlaha idin soo foodsaaraya inta lagu gudo jiro doorashooyinka. Sidoo kale waxa aannu idinkula dardaarmaynaa in dedaalkiinna iyo kartidiinna aad isugu geysaan in inta laga gaadhayo doorashada lagu sugnaado xaalad la ixtiraamayo dhammaan xeerarka la xidhiidha anshaxa doorashooyinka, si ay innoogu dhacdo doorasho qabashadeeda iyo waxa ka soo baxaba lagu kalsoonaado.
Si shaqada guddiga doorashooyinku ay u noqoto mid u qabsoonta si hufnaan iyo xirfad ku salaysan ayaa Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland looga baahanyahay inay ku garab istaagaan wixii ay xukuumadda uga baahdaan iyo in loo hoggaansanaado xeerarka doorashooyinka. In doorashadu ay ku dhacdo jawi caafimaad qaba waxa sal u ah nabad iyo kala dambeyn. Xukuumadda oo adeegsanaysa ciidankeeda nabadgelyo ayaannu kula dardaarmaynaa inay si dhexdhexaadnimo ah ugu adeegaan Xisbiyada tartamaya. Golayaasha kale ee xukuumadda ayaannu sidoo kale la wadaagaynaaa inay ku baraarugsanaadan waajibaadka ka saaran doorasho ku salaysan caddaalad.Si gaara waxa aanu Xukuumadda Somaliland u xasuusinaynaa inay hantida iyo shaqaalaha Dowlada aan loo isticmaalin ololaha doorashada, Xisbiyaduna ay u sinaadaan isticmaalka warbaahinta Qaranka.
Xisbiyada Qaranka Somaliland
Saddexda Xisbi ee ku tartamaya doorashada ayaannu ka filaynaa inay si wadajir ah ula shaqeeyaan isla markaana u xurmeeyaan dhexdhexaadnimada Guddiga Doorashooyinka. Dallad ahaan waxa aannu u soo jeedinaynaa inay ka dheeraadaan waxkasta oo faro-gelin ku ah Guddiga Doorashooyinka. Waxa aannu ka rajaynaynaa in tartankoodu noqdo mid mas’uuliyad iyo xilkasnimo ay weheliso. Saddexda xisbi Qaran waxa aannu kula dardaarmaynaa inay u hoggaansamaan xeerarka anshaxa doorashada oo si wadajir ah loo wada saxeexay.Waxa muhiim ah in saddexda Xisbiba ay ka fogaadaan adeegsiga qabyaaladda iyo waxyaabaha kala fogeynaya midnimada ummada reer Somaliland.
Guud ahaan dadweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa aannu u soo jeedinaynaa inay ka qayb qaataan in doorashadu ay innoogu dhacdo si xor iyo xalaal ah. Inta nasiibka u heshay inay maalintaa codeeyaan ayaa dallada SSE ay kula dardaarmaysaa in aan la dayicin fursadda codbixinta oo xil la iska saaro sidii muwaadinku ugu codeyna lahaa hoggaanka beri Madaxweynaha u noqonaya Jamhuuriyadda Somaliland.
Warbaahinta ka hawl gasha Jamhuuriyadda Somaliland door muhiim ah ayay kaga jirtaa nidaamka geeddi socodka qarannimadeenna iyo weliba ka qayb qaadashada hawlaha doorashooyinka. Dallada SSE waxay idiinka fadhidaa in wararka aad soo tabinaysaan ay noqdaan kuwo ku salaysan xaqiiqda. Waxa kale oo aannu idinkula dardaarmaynaa in kaalintiinnu ay tahay mid dhexdhexaad ah. Ha hilmaamina mas’uuliyadda garbihiinna saaran.
Ugu dambeyn dhammaan qaybaha kale ee bulshada ayaannu iyagana la qaybsanaynaa inay ku baraarugsanaadan kaalinta wax-ku-oolka ah ee kaga aaddan doorashada. Waxay dalladdu idin xasuusinaysaa in waxa keliya ee banii’aadmkaa kaafiyaa uu yahay caddaalad. Ilaahay ayaynu ka baryaynaa inaynu noqono kuwo doorashadooda u qabta qaab ku salaysan caddaalad.
Waxaynu isku ognahay qabashada doorasho loogu baratamo si xor iyo xalaal ah.
Xooghayaha Dallada SSE (Ali Hassan) 0046722524099